Vachinyatsogona Parts, Laser Kucheka Parts, vakafugama Parts, Welding Parts - Gemma
Sheet simbi nhema
CNC tsikwa uye punching
CNC vakafugama basa
Laser nokuveza basa
fekitari wedu anotipa zvakawanda mu-imba basa kusanganisira tsikwa, Laser nokuveza, vakafugama, Welding, powder unhani, Assembly uye zvichingodaro. Our matarenda mainjiniya uye unyanzvi nemhizha kushanda pamwe chete kuti zvokuzvigadzirira simbi dzomuchina tsika simbi nemagungano panguva chaiyo shiviriro.
Ningbo Gemma Metal Product Co., Ltd imwe nyanzvi fekitari kutaura tsika jira simbi azoshandiswa. It riri muna Ningbo, East China, uye kufukidza 8000 mativi metres uye ane kumativi 50 vashandi vane unyanzvi.
Kuziva zvakawanda pamusoro nomumwe chikwata nhengo anogara kwamuri. Ivo chaivo vanhu vamire shure nokubudirira kambani. Tava kudada nyanzvi dzedu sezvo ivo huru motokari simba redu chinoita kuti basa renyu ikure uye kunatsa zuva nezuva.
Precious Metal CNC kumumvuri Laser Cutting Parts
High Raidiwa Laser Kucheka CNC Metal tsikwa Parts
no.555 haifeng mugwagwa, cidong binhan nharaunda itsva, Ningbo guta zhejiang china.